दर्पण, कला र शिल्प कारखाना आपूर्तिकर्ता- SHUNDA - Hinged ढक्कन र कला, शिल्प, शौक र घर भण्डारण OEM र कारखाना को लागी अगाडि अकवार संग ठूलो समाप्त काठ बक्स | शुन्डा
Hinged ढक्कन र कला, शिल्प, शौक र गृह भण्डारण को लागी अगाडि अकवार संग ठूलो समाप्त काठ बक्स
* स्वागत अनुकूलित कुनै बक्स *
धेरै कला, शिल्प र शौक परियोजनाहरु को लागी बिल्कुल सही। उत्तम उपहार सिर्जना गर्नुहोस्
काठ काठ बक्स hinged ढक्कन छ र चिप नक्काशी र काठ को जलाउन को लागी आदर्श छ
गहना बक्स: तपाइँ यो अधूरा गहना बक्स सजाउन सक्नुहुन्छ तर तपाइँ चाहानुहुन्छ
अनफिनिज्ड वुड: यो काठ को काठ बाट बनेको छ कि यो लामो समय सम्म रहन्छ
बहु उपयोग: आमा, प्रेमिका, वा पत्नी को लागी एक प्यारा उपहार को रूप मा उनीहरु trinkets, गहना, र गहना राख्न को लागी
१००% प्राकृतिक काठ
कडा, टिकाऊ, पर्यावरण मैत्री र कुनै तीखो गन्ध छैन। हल्का प्राकृतिक रंग smoothest फिनिश संग, सबै प्रकार को DIY शिल्प शौक परियोजनाहरु को लागी एकदम सही।
तपाइँको प्रियजन को लागी एक व्यक्तिगत हस्तनिर्मित उपहार को रूप मा यो keepake बक्स को उपयोग गर्नुहोस्। तस्बिरहरु, अविस्मरणीय को यादगार, सबैभन्दा "क़ीमती" पलहरु कि तपाइँ एक साथ बिताउनुभयो। तपाइँ सबैभन्दा धेरै हेरचाह गर्नेहरु को लागी एक नयाँ यादगार अनुभव सिर्जना गर्दै।
सामाग्री काठ काठ
मोटाई 0.8mm, 10mm, 12mm, आदि
वितरण समय जम्मा प्राप्त गरे पछि लगभग १० कार्य दिनहरु
कडा, टिकाऊ, पर्यावरण मैत्री र कुनै तीखो गन्ध छैन।
कुनै पनि कोठा मा एक बोहो मोड़ जोड्नुहोस्
यो हस्तनिर्मित भित्ता शेल्फ संग, जो एक अद्वितीय चन्द्र आकार मा राखिएको छ, कुनै पनि कोठा को लागी सही कथन बनाउन। तपाइँको बैठक कोठा, नर्सरी, भान्छा, शयनकक्ष को लागी प्रेरणादायक चन्द्र सजावट जोड्नुहोस्।
प्रीमियम काठ बोहेमियन सजावट
काठ बाट बनेको, हाम्रो भित्ता अलमारियाँ टिकाऊ र सफा गर्न को लागी सजिलो छ। एक बलियो पर्खाल बिरुवा शेल्फ, क्रिस्टल शेल्फ, भित्ता बुकशेल्फ, आवश्यक तेल शेल्फ, वा knick knack शेल्फ मा लगानी गर्नुहोस्।
एक हावा मा आफ्नो फ्लोटिंग शेल्फ झुण्ड्याउनुहोस्
हाम्रो भित्ता सजावट शेल्फ झुण्ड्न को लागी तयार छ, थकाउने विधानसभा मा तपाइँको समय बचत। यो तपाइँको घर को कुनै पनि कोठा मा स्थापित गर्न को लागी शिकंजा को उपयोग गर्नुहोस् र तपाइँको बोहो पर्खाल सजावट लाई उज्यालो।
आफ्नो परिवार र साथीहरुलाई आश्चर्य:
प्रेरणादायक अर्धचन्द्र चन्द्रमा डिजाइन मा यो नक्काशीदार काठ शेल्फ एक अद्वितीय housewarming, क्रिसमस, मातृ दिवस, वा जन्मदिन उपहार बनाउँछ। तपाइँका प्रियजनहरु चन्द्रमा मा हुनेछन्!
1. OEM र ODM, कुनै पनि काठ शिल्प शैली, रंग, आकार, आदि मा अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
2. तपाइँको सोधपुछ हाम्रो उत्पादनहरु वा मूल्यहरु realted 1 घण्टा मा जवाफ दिइनेछ।
Shunda घर सजावट कारखाना एक पेशेवर काठ शिल्प आपूर्तिकर्ता हो कि उत्पादन, डिजाइन, बिक्री र वैश्विक ग्राहकहरु को लागी बिक्री पछि सेवा प्रदान गर्दछ। हाम्रो कम्पनी विनिर्माण र काठ को शिल्प, चन्द्रमा शेल्फ, स्टार शेल्फ, काठ को बक्स, उपहार बक्स, काठ उपहार आदि को रूप मा काठ को शिल्प उत्पादनहरु को सबै प्रकार को डिजाइन मा फोकस।
उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी मूल्य उत्पादनहरु र सबै भन्दा राम्रो सेवा हाम्रो अथक खोजी हो। काठ शिल्प उत्पादन र निर्यात विश्वास मा पहुँच तपाइँ एक राम्रो सहयोग अनुभव दिन सक्नुहुन्छ। नयाँ र विविध शैलीहरु र विचारशील सेवा संग, हाम्रा उत्पादनहरु pralse र हाम्रा ग्राहकहरु को विश्वास जितेको छ, तपाइँको सन्देश को लागी तत्पर छ र हाम्रो कारखाना मा स्वागत छ।
अघिल्लो: 5pcs चन्द्र चरण शेल्फ काठ चन्द्र चक्र भित्ता शेल्फ बैठक कोठा बेडरूम पोर्च पार्टी चन्द्र ग्रहण भित्ता सजावट शेल्फ सेट
अर्को: हर्मीसको उही सेन्ट लुइस क्रिस्टल ताररहित बत्ती बेडसाइड परिवेश प्रकाश लिफ्ट केतली स्मार्ट चार्जर रात बत्ती टेबल बत्ती
डिब्बा काठको बक्स
पर्यावरण मैत्री काठको बक्स
Hinged काठको बक्स
आयताकार काठको बक्स
वर्ग काठको बक्स
अधूरो काठ बक्स
लाच संग काठ बक्स
काठ बक्स फ्रेम
ढक्कन संग काठ को बक्स
लक संग बक्स लक
ऐना संग काठ को बक्स
स्लाइडिंग ढक्कनको साथ काठको बक्स
काठ शिल्प बक्स
ढक्कन संग काठ को शिल्प बक्स
काठ उपहार बक्स
ढक्कन संग काठ उपहार बक्स
काठ उपहार प्याकिंग बक्स
काठ काटिएको बक्स
काठको मेकअप बक्स
काठको छाया बक्स
काठ भण्डारण बक्स
काठ भण्डारण बक्सहरु
काठको ऊतक बक्स
आयताकार वर्ग काठ उपहार प्याकिंग बक्स संग ...
आयताकार वर्ग काठ उपहार पैकिंग तेल बक्स ...
थोक चिनार काठ गोल बक्स लिबास काठ चे ...